Tallaalka COVID-19 ee Carruurta iyo Dhallinyarada - King County
Helitaanka talaalka degmada King County Talaalka dhalinyarada
Hubinta xaqiiqada Sualaha Had iyo Jeer Lays Weydiiyo Talaalka COVID-19
Tallaalka COVID-19 ee Carruurta iyo Dhallinyarada
Qof kasta oo jira 5 sano iyo wixii ka weyn ayaa hadda xaq u leh tallaalka COVID-19. Waqtigaan, tallaalada COVID-19 looma oggola carruurta ka yar 5 jir. Tijaabooyin caafimaad ayaa loogu talagalay carruurta yaryar.
Fursadaha tallaalka ee COVID-19 ee dhalinyarada
Pfizer: da'da 5 sano iyo ka weyn
Johnson & Johnson: da'da 18 sano iyo wixii ka weyn
Moderna: waa 18 jir iyo wixii ka weyn
Markaad balanta qabsaneyso, hubi inay bixiyaan tallaal loo oggolaaday kooxdaada da'da ah.
Tallaalka COVID-19 da'da 5-17 (PDF)
Su’aalaha & jawaabaha waalidiinta iyo walliyada (PDF)
Goobaha Tallaalka ee Dhallinyarada Naafada ah (PDF)
Maxaa la soo qaadnayaa ballanta tallaalkaaga
Dukumeenti si loo xaqiijiyo da'da: gobolka, qabiilka, ama aqoonsiga ay soo saartay federaalka, shahaadada dhalashada, Aqoonsiga dugsiga ama iskuulka ama waraaqo caafimaad oo leh magac iyo taariikhda dhalashada ayaa la isticmaali karaa.
Xidho gacmo-gaaban ama gacmo-furan oo si fudud loo rogi kara si aad uga tallaasho cududdaada sare.
Link/share our site at www.kingcounty.gov/youthvaccine/somali